निद्रा नपुग्दा लाग्छन् अनेकाैँ राेग : जति थोरै सुतिन्छ, उति छिटो मरिन्छ - Health TV Online
निद्रा नपुग्दा लाग्छन् अनेकाैँ राेग : जति थोरै सुतिन्छ, उति छिटो मरिन्छ
निदाएको अवस्थामा मानव शरीरका सबै प्रणालीहरूको ‘नवीकरण’ हुन्छ। निद्रा पुगेन भने तिनमा असर पर्छ। तर निद्रा भने प्राकृतिक हुनुपर्छ। निद्राको औषधिले क्यान्सर, सङ्क्रमण र मृत्युको सम्भावना बढाउँछ।
अनि हामी नपुगेको निद्रा पुर्‍याउन खालि समयको सदुपयोग पनि गर्दैनौँ। तर निदाउनका लागि हामी आफैँलाई प्रशिक्षित गर्न सक्छौँ। वैज्ञानिकहरू भन्छन्– हामीले आफ्नो बानी परिवर्तन गर्‍यौँ भने राम्रो परिणाम तुरुन्तै देखिन्छ।
‘ह्वाई वी स्लीप’ (हामी किन सुत्छौँ) पुस्तकका लेखक प्रा. वाकरले निम्न सुझाव दिएका छन्–
सुत्ने र उठ्ने समय नियमित बनाउनुहोस्
थाल्न सजिलो छ, सधैँ एउटै समयमा सुत्न जानुहोस् र उठ्ने समय पनि नियमित होस्।
दिउँसो सुत्न रमाइलो होला तर राति निद्रा नपर्न सक्छ है!
विकासको एउटा नराम्रो पक्ष भनेको हामी निरन्तर उज्यालोमा हुन्छौँ। निद्राका लागि आवश्यक महत्त्वपूर्ण हार्मोनका लागि शरीरले अँध्यारो खोज्छ।
सुत्नुभन्दा एक घण्टा पहिल्यै नीलो प्रकाशका स्रोतहरू बन्द हुनुपर्छ। यसको अर्थ मोबाइल वा टीभी वा कम्प्युटरको स्क्रीनबाट पर रहनु पनि हो। स्क्रीनले ‘नीलो प्रकाश’ निकाल्छ जसले निद्राको हार्मोन मेलटोनिनको प्रभावलाई निस्तेज पारिदिन्छ।
त्यसैले सुत्नुभन्दा एक घण्टा पहिल्यै नीलो प्रकाशका स्रोतहरू बन्द हुनुपर्छ। सुत्नुअघि कोठाको उज्यालो कम गरेर हामी अँध्यारो बनाउन सक्छौँ।
कोठाको तापक्रम कम राखे निद्रा पर्न सजिलो हुन्छ। प्राकृतिक रूपमै तापक्रम २४ घण्टाभित्र कहिले कम कहिले बढी हुन्छ। तापक्रम घट्दा निद्रा पनि पर्छ।
तर हिजोआज हामी एउटै तापक्रममा बस्न खोज्छौँ। निद्रा पर्न हाम्रो मस्तिष्क र शरीरको भित्री तापक्रम झण्डै एक डिग्री सेल्सियसले घट्नुपर्छ।
कफी कम खानुहोस्
कफी खानु निद्राका लागि राम्रो होइन
तर प्राध्यापक वाकरको सल्लाह यस्तो छ, सुत्नु १२ घण्टाअगाडि मात्रै कफीजस्ता पेय पदार्थ पिउनुहोस्। कफीको ‘हाफ लाइफ’ हुन्छ। त्यसैले यसको प्रभाव छ घण्टासम्म आधा र नौ घण्टासम्म तीनचौथाइ एक्प्रेसो खाएजति बाँकी हुने उनी बताउँछन्।
मदिराबारे विचार गर्नुहोस्
प्रायः मानिसहरू मदिराले निद्रा पार्छ भन्छन्। तर यो सत्य होइन।
याे कुरा प्रष्ट रूपमा बुझ्नुस्, मदिरा र निद्रा साथी होइनन्।